Ny fototra sy ny fitsipiky ny fametrahana induction, inona ny hafanana fanentanana
Ny fototra fanamafisana ny famokarana induction dia takatra sy ampiharina amin'ny famokarana hatramin'ny 1920. Nandritra ny Ady Lehibe Faharoa, dia nipoitra haingana ny teknolojia mba hamenoana ny fepetra ara-pitsipi-dàlana maika ho an'ny fikolokoloana haingana sy azo antoka mba hanamafisana ireo singa metaly metal Vao haingana, ny fifantohana amin'ny famokarana marefo sy ny fanamafisana ny fifehezana ny kalitao dia nahatonga ny famerenana indray ny teknolojia fanentanana, miaraka amin'ny fampandrosoana ny fepetra hentitra, ny toeram-piasana mafy induction heat power supplies.
Ny fanasitranana fanasitranana dia atao amin'ny tontolon'ny fitaterana (tsy voatery ny haavo maitso) rehefa aseho ao anaty saha varimbazaha ny singa. Ny fanasitranana fanasitranana dia noho ny aretim-pisefoana sy ny fahaverezan'ny fihenam-bidy.
Ny fatiantoka hysteresis dia tsy hita afa-tsy amin'ny akora magnetika toy ny vy, nikela, ary vitsy hafa. Ny fahaverezan'ny hysteresis dia milaza fa izany dia vokatry ny fifanenjanana eo amin'ny molekiola rehefa manetsika voalohany amin'ny lafiny iray ny fitaovana, ary avy eo amin'ny iray hafa. Ireo molekiola dia azo raisina ho toy ny andriamby kely izay miodina amin'ny fihodinanan'ny lalana any amin'ny sahan'andriamby. Asa (angovo) no ilaina hitodihana azy ireo. Ny angovo mivadika hafanana. Ny tahan'ny fandaniana herinaratra (herinaratra) dia mitombo miaraka amin'ny taha ambony amin'ny fihoarana (matetika).
Ny fatiantoka Eddy ankehitriny dia miseho amin'ny fitaovana enti-miasa amin'ny sahan'andriamby samihafa. Izany dia miteraka lohateny, na dia tsy manana ny toetran'ny andriamby matetika mifandraika amin'ny vy sy vy aza ireo fitaovana. Ohatra amin'izany ny varahina, varahina, alimo, zirconium, vy tsy metaly tsy metaly ary uranium. Ny onja Eddy dia onja elektrika ampidirina amin'ny alàlan'ny hetsika Transformer amin'ny fitaovana. Araka ny dikan'ny anarany, dia toa mihodinkodina anaty renirano amin'ny eddies ao anaty akora matevina izy ireo. Ny fatiantoka Eddy ankehitriny dia zava-dehibe kokoa noho ny fatiantoka hysteresis amin'ny fanafanana fampidirana. Mariho fa ny fanamafisana induction dia ampiharina amin'ny fitaovana tsy metaly, izay tsy misy fatiantoka hysteresis.
Ho an'ny fanamafisana ny vy amin'ny fanamafisana, fametahana, fampangatsiahana, na tanjona hafa izay mitaky fahamatorana eo amin'ny Tempoly Curie, dia tsy miankina amin'ny fanavakavahana isika. Vao mainka manimba ny toetr'andro ny haavo. Raha fehezina ny metaly manodina ny teboka Curie, dia matetika loatra ny fandraisan'anjaran'ny hysteresis ka tsy azo tsinontsinoavina. Ho an'ny tanjona rehetra, ny I2Ny ran'ny verdy dia ny hany fomba ahafahan'ny angovo herinaratra ho lasa hafanana ho an'ny tetikasa fanamafisana ny indostria.
Zavatra roa fototra momba ny fanasitranana fanasitranana:
Ny fitaovana elektrônika iray napetraka ao anaty saha maitso